Ukutshalwa Kwezimali Okukhulu: I-TinderBox | Martech Zone
Cishe isonto eledlule, DK New Media ungeze iTinderBox, a Isixazululo Sokuphathwa Kwesiphakamiso, ohlwini lwayo lwamakhasimende akhulayo. Ngibhalile mayelana I-TinderBox lapho beqala ukwethula… futhi ngemuva nje kwalokho saba yiklayenti labo. Sijabule ngokusizana ngenxa yamandla angabazekayo anesisombululo sabo.
The I-TinderBox uhlelo lokusebenza lumnandi futhi lungisindisile amahora ngamahora wesikhathi. Ngokuyisisekelo, ngithuthukise indawo yokugcina okuqukethwe nayo yonke imikhiqizo neminikelo yesevisi esiyinikezayo. Njengokulindelwe okucela isiphakamiso, noma yiliphi ithimba lethu lingangena lingene lizobamba izigaba esizidingayo, lishicilele isiphakamiso, lilinde ukwaziswa ukuthi lelo thuba lisibukile, liphendule noma imiphi imibuzo… futhi lithole ukwamukelwa. Anginakungabaza ukuthi isoftware uqobo isize ukuvala amadili athile.
I-TinderBox ivumela abasebenzisi ukuphatha zonke izici zokwenziwa kwamadokhumenti kufaka phakathi: ukubhala, ukufometha, ukuphathwa, ukugunyazwa, nokulandela ngomkhondo ngaphakathi kwesixhumi esibonakalayo esisodwa esilula. Amaqembu amakhulu angahlanganisa ngaphandle komthungo i-TinderBox kuzixazululo zeCRM ezikhona njengeSalesforce.com, okwenza ngcono ukuhamba komsebenzi weqembu labo futhi kunciphise isikhathi sabo sokuvala ibhizinisi elisha. I-TinderBox njengamanje inamakhasimende emazweni ayi-7, asekela iziphakamiso nemibhalo ngezilimi ezi-4.
Namuhla, sijabule ukuzwa ukuthi iTinderBox ixhaswe yi HALO, isinyathelo sesifunda sokutshala imali ezinkampanini zobuchwepheshe ezinamandla amakhulu. UHALO umele Izingelosi zeHoosier Zifuna Amathuba. I-Techpoint uphatha iqembu labatshalizimali be-HALO. Lokhu kutshalwa kwemali kuletha ukutshalwa kwemali okuphelele kwe-HALO ezinkampanini zase-Indiana ku- $ 17.1 million ezinyangeni ezingama-36 ezedlule.
I-TinderBox enye emugqeni omude wezinkampani zase-Indiana ezikhule ekhaya eziqophe ama-niches abalulekile ekuphathweni kwezentengiso nendawo elinganisiwe yokumaketha. UMark Hill, obambe iqhaza kwiHALO nosihlalo webhodi labaqondisi beTechPoint.
Inkampani iyaqhubeka nokwengeza izici ezinhle nokusebenza - kufaka phakathi izexwayiso ze-SMS, Ukugcinwa Kwesiphakamiso, Isifanekiso Sokulinganisa (bekukhona ekuvuseleleni kwethu kwakamuva… nokuthile esizokusebenzisa ngokunenzuzo), kanye nokuhlelwa okuphelele. Iziphakamiso zethu zibukeka zimnandi futhi singafaka namavidiyo kuzo:
Nayi ividiyo yesingeniso. Qiniseka ukuthi uvakashela futhi ubhalisela i- isivivinyo samahhala!
Tags: isoftware yokuphakanyiswa onlineIsiphakamisoisoftware yokuphakamisaisiphakamiso sokuthengisaisoftware yokuphakanyiswa kokuthengisatinderbox
Jun 23, 2011 ku-4: 14 PM
Ngifunde okuncane ngeTinderBox, kepha kuhle ukubona ukuthi iyakhula futhi iyathuthuka. Manje uma kuphela iTinderBox ingathola isisombululo ku-RFP esesabekayo.
Jun 23, 2011 ku-6: 00 PM
Banendlela enhle yokugcina izinto yokusesha nokugcina okuqukethwe. Ngicabanga ukuthi uhlelo lungasebenza kahle kuma-RFPs… kepha kuzofanele uhambe ne-akhawunti ye-Pro ukuyithola yonke.
Jun 23, 2011 ku-8: 38 PM
Siyabonga ngokuvuma okuhle uDoug - sijabule kakhulu ukuba iklayenti le- DK New Media!